ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): March 2007
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:05 PM 1 comments Links to this post
၃ပတ်ကျော်ပြီ မနားမနေ တစ်နေကုန် မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ် အလုပ်များနေတာ … အသက်တောင် အနိုင်နိုင်ရှုနေ၇တဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် သနားတောင်သနားလာမိသလိုပဲ :D :D …
ကျမရဲ့ အိပ်မက်လေးတစ်ခု ဖြစ်ချင်တာက Interior Designer ။ ကျမက ရင်ထဲကယုံကြည်ချက်နဲ့ ကျမ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းရာ စာများကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ရေးချင်သေးတယ် .. ။ ကျမရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ကျမရဲ့မိသားစုက ခွင့်မပြုတဲ့အတွက် ကျမက အားလုံးကိုချောင်ထဲထိုးထည့်ထားခဲ့ရတယ် .. ။ ကျမရဲ့ဘ၀မှာက ကျမလုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ကနည်းပြီး ကျမ မဖြစ်ချင်တာတွေချည်း ရှေ့တန်းတင်ပေးခဲ့ရတာ များခဲ့တယ် … ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 6:50 PM 13 comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 10:37 AM 1 comments Links to this post
နအဖဘက်ကနေ ရသလောက်ကပ်ပြီး မရရအောင်ပြောပေးရှာတဲ့ ဘက်တော်သားလေးတွေကို သနားမိပါတယ် ..။ အရင်စိတ်နဲ့ဆို ပြန်အော်မိမှာပါ … ။ အခုတော့ ဒါတွေကို ရီနိုင်ခဲ့ပါပြီ .. ။ ဒေါ်စုပြောခဲ့ပါတယ် “စားပွဲဝိုင်းမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သေချာဆွေးနွေးရင်း တိုင်းပြည်အတွက်အသင့်လျော်ဆုံးကို စဉ်းစားရင်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို ညီမျှစွာဆုံးဖြတ်ရမှာပါ” … ။ သိပ်မှန်ပါတယ် .. ။ အခုက ဘာနဲ့တူလည်းဆိုတော့ တစ်ဖက်က စားပွဲဝိုင်းကို စည်းကမ်းကျနစွာ ၀င်ထိုင်ပေမယ့် တစ်ဖက်နအဖဘက်က တောင်စဉ်ရေရာမရ ပေါက်တတ်ကရ လျှောက်ပြောနေမှတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆုံးတော့မှာလည်း .. ။ အဲဒီအတွက် စကားပြောရာမှာ ၊ အချက်လက်နဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့အရာမှာ ကလေးကစားစရာအကြောင်းလာပြောနေသူတွေကို ကျမခွန်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ … ။
အာပေါက်အောင်ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို နားမလည်သေးတဲ့ စီဗောက်စ်က အကိုတွေလား မောင်လေးတွေလား ဘယ်အရွယ်တွေမှန်းမသိ ၊ နာမည်မသိ ၊ ဘာမှမသိဘဲ ချုံပုတ်ထဲကလက်သီးဆုပ်ပြနေတဲ့ ကိုယ်တော်ချောတွေကို ထပ်ပြောလိုက်ပါ့မယ်။
ဒီမိုကရေစီအတွက် အသက်သွေးတွေ ၊ အချိန်တွေ ၊ ပေးဆပ်မှုတွေပေးပြီး တိုက်ယူနေတာ အိမ်ရှေ့လမ်းမပေါ်မှာ အတွင်းခံထွက်လှမ်းဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်္ကြန်မှာ ဗြောက်အိုးဖောက်ဖို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ အဲဒီလို တောင်မရောက် မြောက်မရောက် အကျိုးမရှိတဲ့ အပေါစားဆန်တဲ့ ၊ လမ်းဘေးဆန်တဲ့ စကားတွေကို နအဖ ဘက်တော်သားတွေပြောလွန်းလို့လည်း ကျမက နအဖဘက်ကလူဆို ၁%တောင် သနားလို့ အထင်ကြီးလို့မရခဲ့တာ အရင်ကတည်းကနေ အခုချိန်ထိပါပဲ… ။
လူသားချင်းညီမျှတဲ့ အခွင့်အရေး ၊ လွတ်လပ်စွာပြောပိုင်ခွင့် ၊ မျှတသော ဥပဒေတွေအပါအ၀င် စည်းကမ်းညီညွတ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ဗီုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းကနေ မျက်လုံးကောင်းသေးရင် ပြန်ဖတ်လိုက်ပါအုံးရှင်။
ဘိုးတော်ဘုရားခေတ်ကလို ကနွဲ့ကလျ ၊ လေးချိုးသံများနှင့် နအဖယုတ်မာခြင်းတွေ ၊ ဘက်တော်သားတွေ အဆင့်မရှိတာတွေကို ကျမ မပြောတတ်ပါ … ။ နှုတ်ကြမ်းတယ်ဟု ဆိုခဲ့လျင်လည်း ကျမ ဘာမှမပြောလိုပါ ..။ သူ့နေရာနဲ့ထိုက်တန်သော ၊ နားထဲပြင်းပြင်းဝင်သွားနိုင်သော ခေတ်သစ်စကားများသာ ကျမသုံးတတ်ပါသည်။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 10:38 PM2comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 10:07 PM6comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 10:01 PM3comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:02 PM3comments Links to this post
ကျမနဲ့ လမ်းကြောင်းတူတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်လည်းဖြစ်တဲ့ လေးစားရတဲ့ အကိုတစ်ယောက်က ဒီကဗျာလေးကို မနက်က မေးလ်ထဲ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီးပြီးချင်း ရင်ထဲဝမ်းသာတာလား ။ ကျေးဇူးတင်တာလား ။ ဘာလည်းတော့မသိတဲ့ ခံစားမှုလေး ဖြစ်သွားပါတယ် ။ အဓိကကတော့ အသိမှတ်ပြုခံရတဲ့ ခံစားမှုလို့ထင်ပါတယ်။ ကဗျာကိုရေးပို့ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ အကို ။ စာတစ်စောင် ကဗျာတစ်ပုဒ်က လူတစ်ယောက်အတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။
I unexpectedly gotasister
She loves truth and justice
She takes actions for truth and justice
She is good at writing
She feels sympathy for innocent people in her homeland
She is young yet mature in her way of thinking
I am proud to haveasister like her
May her guiding light be strong
May her life be filled with peace and happiness
Posted by LIN LET KYAL SIN at 3:54 PM5comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 3:36 PM4comments Links to this post
If ကဗျာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာသာပြန်ခဲ့တာပါ .. ။ လင်းလက်ဘလော့ခ်မှာ တစ်ကြိမ်ဖော်ပြပြီးပါပြီ ..။ အရင်ကူးရေးတဲ့နေရာမှာ စာပိုဒ်၂ခုကျန်ခဲ့တာနဲ့ အသစ်သေချာပြန်တင်ပေးတာပါ ..။ တစ်သက်မမေ့နိုင်တဲ့ ကဗျာထဲမှာ ဒီကဗျာကထိပ်ဆုံးမှာပါပါတယ် .. ။ တန်ဖိုးသိပ်ရှိလွန်းပါတယ်… ။
မင်းကလည်းအမုန်းတွေပြန်မပွားဘူးဆိုရင် …. ။
စိတ်ကူးနိုင်မယ်ဆိုရင် ……….. ။
တွေးခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ………. ။
ခံယူထားနိုင်မယ်ဆိုရင် …….. ။
မင်းဟာတည်ငြိမ်စွာနဲ့နာကြားနိုင်မယ်ဆိုရင် … ။
ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် … ။
ဆက်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင် … ။
ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကိုစောင့်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် … ။
မာန်မာနသွေးမကြွဘူးဆိုရင် …. ။
ရန်သူကဖြစ်စေ ၊ မိတ်ဆွေကဖြစ်စေ
မင်းကိုနာကြဉ်းအောင်မလုပ်နိုင်စေရင် … ။
စွဲလမ်းမှုသံယောဇဉ်တွေထားမနေဘူးဆိုရင် …. ။
အရာရာဘာမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီပေါ့ …. ။
မင်းဟာလည်းယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပေါ့ .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 5:09 PM2comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 4:46 PM9comments Links to this post